Alexa, olu olu nke onwe nke Amazon, nwere ike ịchụ ihe karịrị ijeri $ 10 na ego ha ga enweta n'ime afọ ole na ole. Na mbido Jenụwarị, Google kwuru na ọ reela ihe karịrị nde Google Home Ngwaọrụ kemgbe etiti Ọktọba. Enyemaka bots dị ka Alexa na Hey Google na-aghọ ihe dị mkpa nke ndụ nke oge a, nke ahụ na-enyekwa ohere dị ịtụnanya maka ụdị iji jikọta ndị ahịa na ikpo okwu ọhụrụ. N'ịchọ ịnakwere ohere ahụ, ụdị na-agba ọsọ
Dị Kpọtụrụ, Bots, na Spam Shame
Anti-spam bụ nnukwu isiokwu na email. Ndị mmadụ na-anwa idebe igbe mbata ha ọcha kemgbe ọtụtụ afọ site na ihe niile site na ngwaọrụ spamarrest na-akpasu iwe ruo na nzacha junk-mail dị mfe na ikike anwansi ha maka nkwupụta ụgha. N'ezie, spam na-ezigara ghọrọ nsogbu ka gọọmentị wee banye (were ya) wee dee iwu banyere ya. Ma, e nwere otu ụdị nke spam nke ka na-na ndị na-amụ anya si enwetaghị… na m na-enwe olileanya na ị ga-enyere